Ungayiphucula njani impilo yeemvakalelo: Iingcebiso ezi-5 eziphambili ngokuzama ngoku
NgoMvulo weNgqondo: Iindlela ezi-5 ezilula zokuKhulisa impilo yakho yeemvakalelo
NgeMivulo yengqondoIindlela ezi-5 ezilula zokuKhulisa impilo yakho yeemvakalelo
DNgaba uyazi ukuba uxinzelelo lweemvakalelo lungakhokelela kwisigulo sengqondo? Ukukunika ukujonga okuphezulu kwentsingiselo yempilo yeemvakalelo kunye nokwabelana ngeendlela ezilula zokunyusa impilo yakho yeemvakalelo ngaphandle kokophula i-bhanki kugxilwe kwethu namhlanje.
Sazise uluhlu olutsha olubizwa NgeMivulo yengqondo, apho siza kube sithatha inani lezihloko ezinxulumene nempilo yengqondo nemvakalelo. Njengenxalenye yolu chungechunge, siza kugxila kwezihloko ezihlala zihoywa e-Nigerian, e-Afrika nakwezinye iindawo zabahlali abantsundu ngeenjongo zokuncedisa ukuzikisa impilo yengqondo kwinkcubeko yethu.
Kwabaqalayo, masicacise umahluko phakathi kwempilo ngokweemvakalelo nangengqondo, sibona ukuba zisoloko zisetyenziswa ngokufanayo. Zombini ezahluke mpela kodwa awukwazi ukuba enye ngaphandle komnye kwaye ukungalingani kwelinye kuchaphazela enye. Cinga ngabo njengeqela lethegi!
Impilo yengqondo ibhekisa kumandla akho okuqhubekisa ulwazi ngelixa impilo yeemvakalelo ibhekisa kumandla akho okuchaza iimvakalelo ezisekwe kulwazi olwenziweyo.
Kwaye ngoku ukuya kwisihloko sosuku, Impilo yeemvakalelo!
Impilo yeemvakalelo yinxalenye ebalulekileyo yezempilo; iyafana ngokugqibeleleyo. Abantu abaphilile ngokweemvakalelo bakulawula iingcinga zabo, iimvakalelo kunye nokuziphatha. Bakwazi ngakumbi ukujongana nemiceli mingeni yobomi. Kananjalo banokugcina iingxaki ngokwembono kwaye bayakwazi ukulawula nokuchaza ezo mvakalelo ngendlela efanelekileyo yobudala.
Ukuba sempilweni ngokwasemphefumlweni akuthethi ukuba uyonwaba ngalo lonke ixesha, endaweni yoko kuthetha ukuba uyaziqonda iimvakalelo zakho kwaye unako ukujongana nazo, nokuba zintle okanye zizo. INigeria, iAfrika, iGhana, uMzantsi Afrika, amadoda amnyama, abafazi.
Nazi iindlela ezi-6 zokukhuthaza impilo yakho yeemvakalelo…
1. Yandisa inkqubo yakho yenkxaso
Kubaluleke kakhulu ukuba ube nenkqubo yenkxaso. Ufuna abantu onokuthetha nabo malunga neengxaki zakho ungoyiki ukugwetywa. Abantu abazimisele ukumamela xa ufuna ukususa izinto esifubeni sakho. Ezi zikwenza wazi ukuba awuwedwa kuyo nayiphi na imeko ohamba kuyo ethatha impilo yakho ngokweemvakalelo.
Inkqubo yakho yenkxaso inokwenziwa ngamalungu osapho, izihlobo ezisondeleyo, amalungu eqela lenkolo okanye ingcali kwezonyango. Ukuba nenkqubo eyomeleleyo yenkxaso linyathelo lokuqala kulawulo lweemvakalelo zakho. Ukubeka nje, ukususa izinto esifubeni sakho kuya kunceda ekuqinisekiseni ukuba awuphefumli okanye ubilise ngaphakathi.
2. Ukunciphisa uxinzelelo
Wonke umntu uziva exinezelekile amaxesha ngamaxesha. Nangona uxinzelelo ngamanye amaxesha lunokunika amandla angxamisekileyo xa lufuneka kakhulu. Nangona kunjalo, xa uxinzelelo luhlala ixesha elide-imeko eyaziwa ngokuba luxinzelelo olungapheliyo, iba yingozi kunokuba luncedo.
Kangangoko kunokwenzeka, sinciphise uxinzelelo. Jonga kubuntu bakho, usapho, umsebenzi kunye nendawo yentlalo kwaye uchonge ezona zinto zibangela uxinzelelo kubomi bakho, emva koko ucwangcise ngobuchule abo baxinzelelo. Kunqande ukuluma ngaphezulu kunokuba unokuhlafuna emsebenzini okanye ngenye indlela. Sukuba ngumntu onceda abantu xa uzama ukusindisa umhlaba uphulukana nengqondo yakho kunye nesiqu sakho siphela. Kwakhona, ukufunda iindlela ezisempilweni zokuhlangabezana noxinzelelo olungenakuthintelwa kuya kunceda ukomeleza impilo kunye neemvakalelo.
3. Hambisa amashiti
Oku akunakuze kugxininiswe ngakumbi. Ngayo yonke into esifuna ukuyenza ngaphambi kokuphela kosuku, sihlala sinikezela ngokulala. Kodwa umgangatho kunye nobuninzi bokulala esibufumanayo buchaphazela impilo yethu yengqondo nto leyo ichaphazela nathi ngokweemvakalelo. Xa sidiniwe, asinakusebenza ngamandla ethu. Ukulala kusinceda ukuba sicinge ngokucacileyo, sibe nokuqonda ngokukhawuleza kwaye sigxile ngcono. Ke, yenza iphuzu lomsebenzi ukuba ubuncinci iiyure ezingama-7-8 zokulala ubusuku ngabunye.
4. Unakekele impilo yakho yomzimba
Impilo enkenenkene emzimbeni inokuchaphazela impilo yakho yeemvakalelo kunye / okanye ikhokelele kumngcipheko owandayo wokukhula neengxaki zempilo yengqondo. Zilolonge rhoqo kwaye utye ukutya okunempilo. Ngokwe a isifundo sipapashwe ngo-Okthobha ka-2017 in Uphengululo kwi-Neurosciences, ukuzivocavoca kuphucula imeko yakho kwaye kunezibonelelo ezibanzi zempilo yakho yomzimba.
Uphando lubonisa ukuba ukwenza umthambo kunefuthe ekukhutshweni nasekuthathweni kweekhemikhali ezibonakala zibizwa ngokuba zii-endorphins kwingqondo. Nokuba kuqhekezwa nje okwemizuzu eli-10 ukuhamba ngebhongo kwandisa ukuphaphama kwengqondo, amandla kunye nemvakalelo elungileyo. Ke xa ngokulandelayo uziva uphantsi ngokweemvakalelo, cinga ngokuthatha uhambo kwaye ubone umohluko owenzayo.
5. Funa ukuncipha ukuze unganciphisi
Unyango yindlela elungileyo yokuzikhulula. Cinga unyango njengoluhlobo longenelelo olunqanda umntu ukuba angehli. Qaphela ukuba, unyango aludingeki kuphela xa zonke isihogo sikhululiwe, kodwa unokufumana unyango lwexesha elithile lokulawula uzinzo lwakho ngokweemvakalelo, ngakumbi ukuba ushukunyiswa ngokulula. Ukubona ugqirha ekunyanga kunika ithuba lokuba wakhe ukuthembana nomnye umntu ongayi kukugweba okanye aphalaze iti yakhe ukuze bonke babone.
Impilo yeemvakalelo ayikho malunga nokucinezela iimvakalelo okanye ukunciphisa ubungakanani bemvakalelo esiyibonakalisayo. Ngaba usaya kuziva unomsindo, unxunguphalo, usizi nehlazo rhoqo ngoku? Ewe, kungenxa yokuba yindalo yomntu. Kwaye iyinto entle leyo - kuba, kwakhona, ezi mvakalelo zisinika ukuqonda okuxabisekileyo kwinto esiyifunayo nesiyifunayo kodwa isitshixo kukulawula ngabom iimvakalelo zethu ngokwenza izigqibo ngabom malunga nokuba zichaphazela njani indlela esiziphatha ngayo, ubudlelwane bethu kunye nobomi bethu, ngokubanzi .
Ekugqibeleni, unyango lukunceda ukuba uhlale unempilo yeemvakalelo kwaye uthintela ukuphazamiseka kwengqondo.
Thatha ulawulo lwempilo yakho yeemvakalelo kwaye uqwalasele ukufumana ingcebiso kwi-Intanethi ngokusebenzisa iinkampani zefowuni ezifana Rave Psychiatry.
Ityala lemifanekiso: Instagram | Annakozdon
Yapapashwa kwasekuqaleni ngo-Matshi 2, 2020. INigeria, iAfrika, iGhana, uMzantsi Afrika, amadoda amnyama, abafazi. Ingqondo. Amagosa abahlengikazi,
Ngcebiso impilo ngokweemvakalelo umzimba impilo olunxibelelwano olufanelekileyo ukulala uxinzelelo lawulo loxinzelelo iqela lokuxhasa unyango
UVivian Bens-Patrick Ngamana 25, 2020
NgoMvulo weNgqondo: Amanqanaba ama-5 oSizi kunye neendlela ezinempilo zokujongana nayo
NgoMvulo weNgqondo: Izizathu ezi-5 zokuBona i-Therapist ayisiButhathaka
Izinto ezi-6 zezothando onokuZenza neQabane lakho kwiKhaya laseKhaya
6 Iimbono eziphosakeleyo malunga neMpilo yeNgqondo